मेरो सरकार भनेवापत पनि जनताले आभारी हुनुपर्ने कि ? बेलायतको बुढो परम्परालाई जबर्जस्ती बोक्न गणतन्त्र नेपालका नेकपा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकारलाई कसले प्रेरित गर्‍यो ? – हाम्रो देश
मेरो सरकार भनेवापत पनि जनताले आभारी हुनुपर्ने कि ? बेलायतको बुढो परम्परालाई जबर्जस्ती बोक्न गणतन्त्र नेपालका नेकपा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकारलाई कसले प्रेरित गर्‍यो ?
“सदनमा सम्बोधन गर्न जाँदाको राष्ट्रपतिको सवारीशैली किन्चित् फरक त देखियो । तर सम्बोधनक्रममा राष्ट्रपतिले ‘नेपालसरकार’लाई ‘मेरो सरकार’ भनेको सुन्दा भने थप दुःख लाग्यो । कति आन्दोलन गरिखाएकाहरुलाई लोकतन्त्रको सामान्य मर्यादा पनि थाहा नहुनु दुःख लाग्दो कुरा हो ।” साथीले भन्नुभयो, “हुन त यी गैँडा हुन् ! यिनीहरुलाई काउकुती लाग्दैन ! भनिन्छ, युवा वेलामा गैंडाको शरीरमा कसैले काउकुती लायो भने त्यो काउकुती त्यसको चेतनाको तहसम्म पुग्दा त्यो गैंडा फुकिढल्नु बुढो भइसकेको हुन्छ !!!”‘मेरो सरकार’ शव्दावली प्रयोगको पक्ष विपक्षमा धेरै तर्क वितर्कहरु पढिए । शव्दावली प्रयोगका पक्षमा सदनमा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको जवाफले भने हामीजस्ता जनताको चेतनालाई चिमोट्न कहिल्यै छोडेन ।
बेलायतमा र त्यसकै अनुचर कमनवेल्थ मुलुकहरुमा संविधानमा तदनुरुप व्यवस्था गरेर कार्यकारी सरकारले औपचारिक राष्ट्रप्रमुखलाई सदनमा सम्बोधन गर्दा मेरो सरकार शव्दावली प्रयोग गर्न दिइएको छ भन्ने बहानामा बेलायतको बुढो परम्परालाई जबर्जस्ती बोक्न गणतन्त्र नेपालका नेकपा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकारलाई कसले प्रेरित गर्‍यो ? यसमा जनताको चासो रहनु स्वाभाविक छ । जनताका बलबुतामा यति अजङ्गका परिवर्तनपछि पनि नेपाली सत्तासीनहरुले बेलायत वा फ्रान्सका थोत्रा परम्पराहरुलाई बोकिराख्नु पर्छ र ? कुनै देशविशेष हाम्रा मित्र हुँदैमा त्यहाँ रहेका बुढापुराना चलनहरु पनि हाम्रा मित्र नै हुने त होइनन् ।कम्युनिष्ट पार्टीका सत्तासीनहरुले नयाँ गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुपर्ला ? यसका लागि सामन्ती तथा पूँजीवादी बुढा शासकहरुको भन्दा फरक र सुन्दर विधि संस्कृति हुन सक्दैन ? हुनु पर्दैन ? नयाँ गणतन्त्रमा पनि पुरानै सामन्ती संस्कारको मपाइँवादी सम्बोधन जनताका कानमा स्वादिष्ट बन्नु पर्छ ?
‘मेरो सरकार’ शब्दावलीका अतिरिक्त मुलुकमा शव्दहरु त अरु पनि छन् नि । जस्तै श्री ३, श्री ५, श्री ६, श्री १०८, श्री १००८। हिजोका शब्द शब्दावली सत्तासीनहरुका लागि प्रिय नै हुनुपर्ने हुन् भने हिजोका कुन कुन शब्द आज कसकसले पहिरिने त ? अथवा आजका सत्तासीनहरुले हिजोका यस्ता शब्दहरु पहिरिनु पर्ने कि नपर्ने ? आज पनि सरकारहरुहरु छन् । स्थानीय सरकार, जसलाई कतिले डोजरमालिक पनि भन्छन्, बीचको सरकार छ, माथिको ठुलो सरकार छ । सरकारहरु विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरुको मालिक बन्ने, जनताले टुलटुलु हेरिरहने, सुनिरहने ? यही हो लोकतन्त्रको महिमा ?लेनिनले त आफुलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति केही नभनेर कमिसार मात्र पनि भने । नेपाली जनताले यस्ता कुरा तपाईँ कामरेडहरुबाटै सुनेका हुन् । आज पनि संसारमा कति मन्त्री प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छन् जो आफुलाई जनसेवक ठान्छन् र कम खर्चको सादा जीवनमा रहन्छन् । जनताका अगाडि शान देखाउन लाज मान्छन् ।